China Full Aluminiyam Dome Intloko Blind Rivet umzi-mveliso kunye nabavelisi |Yuke
I-Aluminiyam epheleleyo ye-Dome intloko eyimfama i-rivet ine-plastiki ephezulu, ukumelana nokudinwa okulungileyo, kwaye inzima kwaye inzima.Kulula ukuyisebenzisa, i-glossy kunye nokufuma okuxhasiweyo.Isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo kunye namasimi oshishino.
Izinto: Umzimba weAluminiyam / Isiqu seAluminiyam
UkuQeda komphezulu: IsiPolish / isiPolish
1. Amava emveliso yobuchwephesha
I-YUKE inezinga eliphezulu leemveliso ezahlukeneyo, uluhlu olufanelekileyo, ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nentsebenziswano ezinzileyo.
2. Gqibezela izibonelelo zemveliso
Sinomgca opheleleyo wemveliso, kubandakanywa oomatshini bokubumba abandayo, oomatshini bokupholisa, oomatshini bokulungisa, oomatshini bendibano, oomatshini bokuvavanya, oomatshini bokupakisha njalo njalo.
3. Inkonzo engcono.
Intsebenziswano yexesha elide lukhokelo lwethu.Sithumele iimveliso zethu eYurophu, eU.SA, eRashiya, kuMbindi Mpuma.
Siza kugxila kwezi marike kunye nengxelo.Siye safumana igama elihle kunye nokuthenjwa.
I-WUXI YUKE ngumvelisi ochwephesha wee-rivets ezingaboniyo kunye ne-fasteners ngaphezu kweminyaka elishumi yamava.
Sinoluhlu olupheleleyo lolawulo kunye nemveliso yokuqinisekisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo.
Iimveliso zethu zithunyelwa kuzo zonke iindawo zehlabathi kwaye zinegama elihle.
Sikholelwa ukuba sinokuzisa iimveliso ezingcono kunye neenkonzo ezingcono kubathengi bethu.
Ngaphambili: Intloko yentsimbi eyiDome eyimfama epheleleyo iRivet
Okulandelayo: Dome Head Blind Rivet Steel Stainless
Isixhobo seRivet Nut Rivnut
Uhlobo lwePeel yeAluminiyam yentsimbi yeentyatyambo iiBlind Rivet
Vula i-Alum Steel Blind Pop Rivets
Ezimhlophe Zonke Aluminiyam POP Rivets Intshayelelo
I-POP Rivet Countersunk 120 Degrees All Steel